Akaụntụ Banyere Akaụntụ Banyere mbupụ iji mepee Akaụntụ Ọhụrụ
Ego ego Akaụntụ Banyere mbupụ
Imirikiti ndị mmadụ na-eguzobe ihe ndekọ ego ụlọ akụ maka nchebe ihe onwunwe site na ikpe ikpe na maka ego nzuzo. Ịzụtaghị ịkụ ụgbọ mmiri n'ihi na ịchọrọ ịkụ egwu. Ịzụta otu n'ihi na ịchọrọ oghere. Ya mere, ọ bụghị nanị na anyị ga-ajụ, "Gịnị bụ ụgwọ iji guzosie ike na ịnọgide na-enwe akaụntụ nke dị n'ụsọ oké osimiri?" Anyị kwesịkwara ịjụ, sị, "Gịnị bụ ụgwọ, nchebe ego na ego nzuzo?"
Yabụ, maka nchekwa ngwa ahịa na nzuzo nzuzo, iwu nke mbụ abụghị imepe akaụntụ ahụ n'aha nke gị. Mepee ya n’aha ụlọ ọrụ dị n’akụkụ oke osimiri, LLC ma ọ bụ ntụkwasị obi. Ka e were ya na aha gị bụ Pat Smith. You ga-esi ego site n’ụlọ akụ gbada n'okporo ụzọ gaa na ọdụ dị n'okporo mmiri nke “Pat Smith” nwere. Ọ bụ ya mere anyị ji emepekarị akaụntụ akụ ndị dị n'akụkụ mmiri n'okpuru aha ụlọ ọrụ ma ọ bụ ntụkwasị obi.
Nke a na-abawanye na nzuzo, n'ihi na nnyefe waya na-enyefe na ma dịka ndị ọzọ mbupụ ala A na-eduzi azụmahịa a n’aha ụlọ ọrụ, ọ bụghị nke ya. Feegwọ mbido maka imeghe akaụntụ akụ na-anọkarị n'etiti $ 550 ruo $ 1,250. Nke a dabere na ụlọ akụ na ikike. Companylọ ọrụ dị na mpụga na-agbakarị n'etiti $ 1,685 na $ 2,495. Ya mere, mkpokọta na-abụkarị $ 2,235 na $ 3,745 maka ha abụọ.
Ego ole ka ụlọ akụ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri dị?
Dabere na Quora, e nwere ọdụm 14,600 e mere atụmatụ na ụwa dịka ederede a. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ dị ole na ole ga-emeghe akụkọ maka ndị ala ọzọ, karịsịa ndị si US, UK, Canada ma ọ bụ Australia. Ọzọkwa, e nwere ọkwa dịgasị iche iche dị iche iche na-enye afọ ojuju. Ego gị ọ ga-adị mma? Ị nwere ike ịtụkwasị ndị na-akụ azụ obi? Chee echiche banyere ya. Nke a bụ ego gị. Ịchọrọ ahụmahụ ego na-enye obi ụtọ na nchekwa dị mma site na mmalite usoro.
E nwere ọtụtụ ụlọ nchekwa dị oke egwu, ụlọ akụ na-enye nnukwu ọrụ. Mana enwere ọtụtụ ụlọ akụ na - anabatakarị ịchọta nke ziri ezi site n'ịgbanyegharị na ịntanetị. Zọ kachasị mma iji chọpụta bụ jụọ onye nọrọ tupu mgbe ahụ; tumadi onye guzobela ihe ndekọ azụ maka ọtụtụ puku mmadụ. Yabụ, goro ọkachamara. Ọ ga-abara uru na obere ego iji nweta ya oge mbụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, enwere nọmba ekwentị na mpempe ndụmọdụ na nyocha a. Gbasaa ma were ya.
Banlọ akụ dị na mba dị iche iche chọrọ ngwa, ike ruru na nkwụnye ego mbụ iji mee ka akaụntụ gị rụọ ọrụ. Ngwa a na-akwụkarị ọtọ. Ọ nwere aha, adresị na akara ekwentị gị. You ga-enye echiche dị egwu banyere ole ịchọrọ ịchebe na iwepụ na ozi ndị ọzọ.
Chọpụta, ị chọrọ nzuzo. Ma ịchọghị ihe nzuzo nke na onye na-eme ka ị ga - abanye n'ụlọ akụ werekwa ego gị. Yabụ, maka ịdị uchu, dị ka akwụkwọ paspọt gị edeghị ede, a ga-achọ akwụkwọ ikike izizi ihe na akwụkwọ ozi. Ha kwesịrị ịma na ọ bụrụ na mmadụ kpọọ, ozi ịntanetị ma ọ bụ na-aga n'ime akụ iji jụọ maka ego ọ bụ gị n'ezie. Ozi gị ga - abụ ihe nzuzo. Mana ịchọrọ ka ego ahụ bịakwute gị, ọ bụghị onye na-ekwu na ha bụ gị. Nke ahụ bụ nnukwu ihe mere ha ji arịọ akwụkwọ njirimara.
Ọ bụ ihe nkwụsi ike akụ na ụba mgbe ụmụ amaala obodo na-eche ụlọ akụ ha ka echekwa na enweghị nchekwa. Nke a bụ ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ. Ya mere, ndị mba ụwa na-ezukọ kwa afọ na Basel, Switzerland ịbịa usoro iwu maka banki mba na mba. Ego ole ka ụlọ akụ nwere ike ịnwe iji tụnyere akụ akụ? Ego ole ka ekwesịrị ijigide? Kedụ ihe dị ha mkpa iji wee mee ka ihe ndị omekome na akụ na ụba na-apụnara ndị mmadụ pụọ na sistemụ?
Otu n'ime iwu ndị na-ewu ewu na-akụ n'okirikiri bụ Cayman Islands. I nwere ike iguta ihe banyere Companylọ ọrụ Cayman na akaụntụ.
Yabụ, ihe ọzọ mere ụlọ akụ ji achọ uchu bụ na ha chọrọ ịnabata “ezigbo ụmụ nwoke” ma debe “ụmụ ọjọọ” ahụ. May nwere ike ịchọ nzuzo. Mana ichoro ka ego gi chekwaa ya na nnweta. Yabụ na ịchọghị ndị na-achịkwa mba niile ka ha mechie ụlọ akụ ma mefuo ego gị. Nke ahụ bụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị kerịta ụlọ akụ na ịlọ ụwa nke Osama Bin Laden. Ndị ụlọ akụ na-ajụ naanị maka ịchọpụta akwụkwọ n'ihi na ha dị nkọ. Ha chọrọ ka gị na ndị na-edebe ego nke ọzọ nọrọ nchekwa. Ọzọkwa, ha achọghị iwepu akwụkwọ ikike maka ụlọ akụ ha site na akpachapụghị anya na-anabata ndị ọjọọ na sistemụ.
Ihe kpatara na ha anaghị eme ihe ọ bụla
Ime nke a niile nke ụkpụrụ mba ụwa chọrọ abụghị n'efu. Ọ na-efu ego. Yabụ, ọ bụ ya mere imepe ihe ndekọ ego iji tinye ego Mbido. Banklọ akụ agaghị achọ itinye ikikere ha ma tufuo usoro ọrụ ịdị larịị yana ụkpụrụ ịmara onye ahịa gị (KYC). I nwere ike ikwu na ị bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ gal. Agbanyeghị, ụlọ akụ ahụ amaghị gị. Yabụ, ha ga-achọ ka ị gosipụta ya.
Banklọ akụ agaghị emebi iwu a maka na ị na-akpọ ha oku na-agba n'ọnụ gị. Ha agaghị ewezuga ihe ọzọ n'ihi na ị na-awụli elu na ala dịka nnukwu anụ enwe n'ihi na ha na-egbu oge ma ọ bụ na-arịọ maka ozi ọtụtụ. Ndị na-ahụ maka ime obodo na-enyocha akụ na-enyocha ego mgbe niile. Ha kwesiri ijide n’aka na ebe anoghi ego hapuputara igbe nile maka nbudata akaụntụ ọ bụla. Yabụ, atụla anya na Jehova ga-enye gị wink na mọ. Nke ahụ bụ, ha agaghị enye gị nsogbu n'isi n'ihi na ị dị umengwụ ị ga-enweta akwụkwọ ikike ngafe ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ ego. Ha agaghị etinye gị n'ihe egwu iwepu akwụkwọ ikike maka gị. Ha ga-enwe mmasị ịgafe onye ahịa ọzọ na-esoro mmemme ahụ.
Ngalaba Banyere Ụlọ akụ na mbupụ
Maintenancegwọ mmezi kwa ọnwa nwere ike isi na $ 20 gaa $ 100, ma ọ bụ karịa. Transfergwọ mbufe na-abụkarị site na $ 25 gaa $ 75. Ọ bụrụ na ịchọrọ akaụntụ ebe ị nwere ike itinye ego na ahịa ngwaahịa ebe enwere ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike zụọ ahịa nke aka gị. E nwekwara ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịnweta onye njikwa ego nwere ahụmahụ tinye ego maka gị, site na nkwado gị. Ndị na-achịkwa ego na-anakarị obere ego nke ego ha na-achị. Dị ka o kwesịrị, ụdị ego na ego ole enyere site na ụlọ ọrụ. Ha nwere ike ịnọ ma ọ bụ na mpụga nke oke ndị a kpọtụrụ aha ebe a.
Ọnụ ego ọmụrụ nwa kwụrụ na nkwụnye ego, ụgwọ ọnwa kwa yana ụdị nnabata ihe dịgasị iche. Imirikiti ụlọ ọrụ ego dị na mba dị iche iche nwere ọnụego asọmpi iji dọta ndị na-edebe ego. Ego ọmụrụ nwa a na-akwụ n'akụkụ mmiri na-aka elu karịa ụlọ ọrụ ụlọ. Usoro ịtọlite ​​akaụntụ akụ gị dị n'okirikiri ga-agụnye ụgwọ nhazi, ụgwọ nnyefe yana obere ụgwọ ọrụ dị iche iche. Ihe ndị a nwere ike ịgụnye ihe ndị dị ka ebubo notari, wdg OffshoreCompany.com enyerela ọtụtụ puku mmadụ aka imeghe akaụntụ nke ndị nwere ọdụ mmiri, ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi. Yabụ, gbooro anyị mkpa anyị nwere ike inye aka na mkpa ndị ahụ taa.
Chọpụta ikike na akụ ziri ezi maka gị dị mfe. Naanị were ọnụọgụ ma ọ bụ ụdị nyocha dị n’elu wee kọwaa mkpa gị.
<Isi nke 9
Isi nke 11>